Kpọtụrụ – College Ernest Bevin
Onye isi: Ms Tracy Dohel
Ekwentị: 020 8672 8582
A ga-agwa ajụjụ na arịrịọ maka nleta
Tẹ: 0208 672 8582
Faksị: 020 8767 5502
Biko kpọtụrụ kọleji ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrịọ maka mpempe akwụkwọ ozi ọ bụla ebipụtara na weebụsaịtị nke kọleji.
Onye isi oche: Ns. Patel
Enwere ike ịkpọtụrụ ha na kọleji na 0208 672 8582. Maka ozi ndị ọzọ gbasara izipu izizi na kọleji pịa Ebe a
EGO KA ANYI JI
Uteszọ 155, 219, 249, 319, 355, 690 kọleji niile na-agabiga.
Maka inweta nkọwa ndi ozo, pinye aka na websaịtị TFL n’okpuru (willkwesiri ịbanye koodu nzi ozi SW17 7DF)
Transportgbọ njem na London
Site na Tube:
Anyị bụ obere njem site na ọdụ Tooting Bec.
Ntuziaka site na Tooting Bec:
Wepụ ọdụ ụgbọ ala gaa n'okporo ụzọ Trinity, gaa n’aka nri ma gbagoo n’okporo ụzọ Trinity, gafere na ụzọ ụkwụ na-agafe site n'okporo ụzọ dị n'okporo ụzọ Trinity / M&S ebe a na-adọba ụgbọala. Were aka ekpe banye na Glenburnie Road na-agafe na akwụkwọ akụkọ & kafe, then first right into Langroyd Road. Soro uzo a na akuku aka ekpe (ọ na-aghọ okporo ụzọ Brenda).
Na ngwụsị nke Brenda Road ị na-eche Erlọ Akwụkwọ Ernest Bevin. Jiri ịgafe ụkwụ ma banye n’aka nri wee banye ma ọ bụ aka ekpe iji banye ebe egwuregwu site na mpaghara ụgbọ ala (mgbede & site na nhazi naanị).
Ikike Niile Echekwabara site na Ernest Bevin College 2022
Please click Ebe a for more information about the College’s plans to join a Multi Academy Trust.